Ra’iisal wasaare Lövfen oo la kulmay madaxweynaha dalka Faransiiska | Somaliska
Shaqada & Ganacsiga / Socdaalka
Ra’iisla wasaaraha dalkaan Iswiidhan Stefan Lövfen ayaa magaaladda Paris ee caasimadda dalka Faransiiska kula kulmay madaxweynaha dhawaan la doortay eeEmmanuel Macron. Labadan hogaamiye ayaa ka hadlay arrimaha ay ka mid yihiin muhaajiriinta, cimiladda iyo muwaadiniinta Midowga Yurub.
“Waxaan doonayaa inaan u mahadceliyo Iswiidhan oo ah dal wada shaqeyn caalami ahi naga dhaxeeyso, waxaan uga mahadcelinayaa misna wada shaqeynta nabad ilaalinta Maali iyo Gollaha Ammaanka. ayuu yiri Macron.
Kulanka labada hogaamiye ayaa looga hadlay wadashaqeynta Midowga Yurub ee mustaqbalka, soo galootiga, kor u qaadista shaqada iyo ammaanka qaaradda.
“Iswiidhan waxaa ay qaadatay mas’uuliyadeedii iyo ka badan markii ay sanadkii 2015-ka ay qaabishay mihaajirin gaaraya 160.000, waxaa aad looga riyaaqay Paris, waxaanse rajeeynaya in wadashaqeyn iyo badal hagaagsan lugu sameeyo siyaasadda muhaajirinta” ayuu yiri madaxweyne Emmanuel Macron.
Dhinaca kale ra’iisal wasaare Lövfen oo isna markiisa hadlay ayaa sheegay, siddii ugu haboon ee loo joojin karo mowjadda muhaajiriinta ay tahay arrin labadda dowladood quseeya. Midowga Yurub waxaa ay taa uga baahan yihiin waxa aweeye nidaam wada jir ah oo ay dhamaan xubnaha gollaha wadaagaan mas’uuliyadooda” ayuu yiri Lövfen oo misna intaas hadalkiisa ku daray in ay ka wada hadleen oo kale waxyaabaha u ah sababta dhibtaayinkaasi ee ka jira dalalka Afrika ee ka hooseeya Saxaraha oo ay labadda wadanba si caalami ah u joogaan.
Iswiidhan kulan bisha nofeembar qabaneysa
Arrimaha dhinaca bulshadda oo ay labadda hogaamiye ka wada hadleen ayaa ra’iisal wasaare Lövfen sheegay in bisha nofeember ee foooda inugu soo heeysa dowladiisa qabaneeyso shir heer sare oo dhinacaas looga arrinsanayo. “Waxaan kaaga mahadcelinayaa inaad iga aqbashay casumaadeeyda”ayuu yiri Lövfen oo la hadlayey Macron. Labadda dowladood ayaa ugu dambeyntii sheegay ineey dhinacyo badan ay iska kaashan doonaan kuwaas oo ay ka mid yihiin, tamarka, dhaqaalaha iyo muhaajiriinta.
Caruurtii ugu badnayd oo iska dhiibtay Sweden
Wasiiradii socdaalka Nooweey oo sheegtay ineeysan hubin sii ahaan-shaheed wasiir